नेकपा फुटाएका ओलीकै कारण एमाले पनि 'फुट्‍दै'
4th May, 2021 Tue १६:३५:२४ मा प्रकाशित
काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेकपा एमाले फुटको संघारमा छ । आन्तरिक विवाद झाँगिएको एमालेमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूह र झलनाथ खनाल-माधवकुमार समूहबीच पानी बाराबारको स्थिति छ ।
पार्टीभित्र एकलौटी गरेर नेकपा फुटाएका ओलीकै कारण एमाले पनि फुट्‍ने निश्‍चित छ । एमालेभित्रकै विवाद मिलाउन नसकेका ओलीले सोमबार मात्रै बैशाख २७ गते प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत लिने टुंगो लगाए । सरकारले सिफारिस गरेलगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २७ गते संसद्‌ बैठक आव्हान पनि गरिसकेकी छन् ।
विश्वासको मत लिन प्रधानमन्त्री ओलीले सोचे जस्तो सजिलो छैन । अहिलेसम्म जनता समाजवादीको महन्थ ठाकूर समूहले ओलीलाई विश्वासको मत दिनेछ भने उपेन्द्र यादव-डा. बाबुराम भट्टराई समूहले ओलीलाई मत दिने छैनन् । अरु दलको त कुरौँ छाडौँ ओलीलाई एमालेकै खनाल-नेपाल समूहले पनि मत नदिने निश्चित भइसकेको छ ।
पुस ५ गते संसद् विघटन गरेदेखि यता खनाल-नेपाल समूह ओलीसँग रुष्ट छ । पछिल्लो समय २०७५ जेठ २ गतेकै अवस्थामा एमाले फर्किनुपर्ने खनाल-नेपाल समूहको अडानलाई ओलीले मानेका छैनन् । बैशाख २७ गतेभित्रै आफुहरूले कुनै निर्णय लिने खनाल-नेपाल समूहको तयारी छ ।
अब सुनौँ खनाल-नेपाल समूहका नेताका कुरा
खनाल-नेपाल समूहमा अहिले अब के गर्ने भन्‍नेबारे विभिन्‍न ढंगले आन्तरिक छलफल चलिरहेको छ । ओलीलाई सहयोग गर्ने कि नगर्ने ? बैशाख २७ गते अघि आफू निकट सांसदहरूले राजीनामा दिने कि 'फ्‍लोर क्रस' गर्ने ? मुख्यत यी तीन विषयमा खनाल-नेपाल समूहका नेताहरू अनौपचारिक रुपमा छलफल गरिरहेका छन् ।
'विधि र विधान नमान्‍नेलाई किन सहयोग गर्ने भन्‍ने कतिपय साथीहरूको कुरा छ' खनाल-नेपाल निकट नेता जगन्नाथ खतिवडाले खबरडबलीसँग भने 'कतिपय सांसदहरूले सामूहिक राजीनामा दिनुपर्ने पनि बताएका छन् ।' खनाल-नेपाल समूहलाई कहिले कारबाही गरेर तर्साउँछन् त कहिले पार्टीबाट निष्कासन गर्छु भन्‍दै तर्साउनेलाई कुनै हालतमा विश्वासको मत दिन नहुने नेताहरूबीच अनौपचारिक कुरा पनि भएको छ । 'ठाउँ-ठाउँमा सामूहिक राजीनामा दिने अभ्यास पनि नभएका होइनन् अनि 'फ्‍लोर क्रस' गर्ने पनि प्राक्टिस छ' खतिवडाले भने ।
नेपाल समूहकी नेतृ दिलु पन्तले ओलीलाई कुनै हालतमा विश्वासको मत नदिने दाबी गरिन् । 'ओलीलाई सहयोग त कुनै हालतमा गर्दैनौँ' पन्तले खबरडबलीसँग भनिन् 'कि सांसदहरूको सामूहिक राजीनामा हुन्छ कि 'फ्लोर क्रस' हुन्छ ।' ओलीले पार्टीको नाममा मनलाग्दी गरेकाले अत्याचार नसहने उनले बताइन् ।
ओलीले भने- विश्वासको मत दिनुपर्‍यो, देउवाको जवाफ- अब सकिन्‍न
ओलीले प्रदेश प्रमुखबाट हटाएका शेरचन भन्छन् –खुल्ला जेलबाट मुक्त भएँ, खुशी छु !